डा. केसीले भक्कानिँदै भने- बिरामीको सेवा गर्न नपाएकोमा दुःखी छु, माफी चाहन्छु - News - Radioupatyaka
Studio Time (NPT) : 06:33:14 PM
डा. गोविन्द केसी १३ दिनको उपचारपछि मंगलबार डिस्चार्ज भए। उनको दाहिने हातमा क्यानुला खोलिएको थिएन। अनुहार धमिलो थियो। ओठ सुकेका थिए। सधैं लम्कने उनी विस्तारै पत्रकार सम्मेलनमा आए।
सरकारसँगको सम्झौता कार्यान्वयन ढिला हुँदै गएकोमा केसीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
यसबीच चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदबाट पारित भइसकेको छैन। सत्तापक्ष र विपक्षी दुवैले विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव हालेका छन्। मन्त्रिपरिषदबाट सम्झौता अनुमोदन गर्ने बुँदा पनि कार्यान्वयन भएको छैन।
नौबुँदे सम्झौतामा उनका तीनवटा माग सम्बोधन गर्न छुट्टाछुट्टै कार्यदल गठन गर्ने उल्लेख थियो। सरकारले ती कार्यदल गठन गरेको छैन।
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबिबिएस लगायत स्नातक तहका विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धमा कार्यदल गठन गर्ने सम्झौतामा छ। कार्यदलमा संघीय सरकार, कर्णाली सरकार, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, सुर्खेत अञ्चल अस्पतालका प्रतिनिधि र विज्ञ रहने छन्
विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने मापदण्ड निर्धारणका लागि १५ दिनभित्र कार्यदल गठन गर्ने उल्लेख भएकोमा त्यसको पनि सुरसार छैन। यसका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको संयोजकत्वमा सम्बन्धित विज्ञ र कानुनवेत्ता सहितको कार्यदल गठन गर्ने भनिएको छ। कार्यदलको अवधि एक महिनाको हुनेछ।
त्यस्तै, न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की संयोजकत्वको चिकित्सा शिक्षा न्यायिक जाँचबुझ आयोगले दोषी ठहर्याएका पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न दुई महिनाभित्र प्रक्रिया सुरु गर्न सरकार सहमत भएको छ। दुई साता बित्न लाग्दा पनि चाइँचुइँ सुनिएको छैन।
डा. केसीले यी सबै सम्झौता तुरुन्त कार्यान्वयनमा लगियोस् भनेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। छलछाम भए कडा संघर्ष गर्ने चेतावनी पनि दिएका छन्।
पत्रकार सम्मेलनमा डा. केसीले बिरामी जाँच्न नपाएकोमा दुःख पोखे। ‘बिरामीको सेवा गर्न नपाएकोमा दुःखी छु, माफी चाहन्छु,’ निधारमा हात राखेर केसी भक्कानिए।
यसअिघका अनसन उनी टिचिङ अस्पतालमै बस्थे। ‘फलोअप’ मा बिरामीसँग अनसनस्थलमै भेट हुन्थ्यो। यसपटक जुम्लाको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अनसन बसे। यहाँका बिरामीसँग भेट हुन पाएन।
अनसन बस्दा बिरामी र विद्यार्थी दुवैलाई मर्का परेको उनले बताए। ‘मलाई जहिल्यै यो महसुस हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले फेरि अनसन बस्न नपरोस् भनेको हुँ।’
चिकित्सा शिक्षा विधेयकसहित सम्झौताको कुनै पनि बुँदा तलमाथि पार्न नहुने उनको अडान छ। ‘सत्तारुढ दलबाट सहमति अक्षरशः कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ,’ केसीले भने, ‘तोडमरोड भयो भने म फेरि तपाईंहरूलाई बोलाउँछु।’
‘१६ औं पटक अनसन बस्ने?’ पत्रकारको प्रश्नमा केसीले भने, ‘सरकारसँग सम्झौता हुन्छ, कार्यान्वयन हुँदैन। बरू सम्झौताविपरीत राज्यबाट चलखेल हुन्छ। यसपालि राज्यपक्ष इमानदार भइदिन्छ भन्ने विश्वास लिएको छु। भएन भने त मेरो विकल्प सत्याग्रह नै हो।’
संसदमा दर्ता चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा २२ वटा संशोधन गर्न सरकार तयार भएको छ। सोही विधेयक संशोधनसहित ७ बुँदे माग राखेर केसी अनसन बसेका थिए। उनी २७ दिन अनसन बसे। यो अहिलेसम्मकै सबभन्दा लामो थियो।